Muqdisho: 9 qof oo Isbitaalka Martiini ugu dhimatay Cudurka Coronavirus | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Muqdisho: 9 qof oo Isbitaalka Martiini ugu dhimatay Cudurka Coronavirus
Muqdisho: 9 qof oo Isbitaalka Martiini ugu dhimatay Cudurka Coronavirus
Muqdisho (Halqaran.com) – Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya, ayaa si horudhac ah u shaacisay in xalay Isbitaalka Martiini ee Magaalada Muqdisho ay ugu geeriyoodeen dad gaaraya 9 (Sagaal) ruux, kuwaasi oo Isbitaalka la keenay.
Qoraal kooban oo Wasaaradda Caafimaadka ay soo saartay ayaa waxa ay ku sheegtay Bukaanadan oo xanuunsanaa xalay Isbitaalka la keenay, lagana qaaday Baaritaanka Covid-19.
Sidoo kale wasaaradda ayaa qoraalka ay soo saartay ku tiri “DIGNIIN: Waxaa soo kordhaya bukaannada uu soo ritay caabuqa ee isbitaallada gaarka loo leeyahay u soo gudbinayaan marka xaaladdoodu gaarto heer aan waxba laga qaban karin, taas oo sababta in Ia badbaadi waayo bukkaano badan oo ay dhaqaatiirtu aaminsan yihiin in Ia bad baadin karay haddii xilli hore Ia soo gudbin lahaa.”
“Sidaas darteed dhammaan lsbitaallada waxaa looga digayaa in bukaannada leh astaamaha safmarka COVID-19 ay ku hayaan waa waajib saaran maamulka isbitaallada inay soo gudbiyaan bukaannada Isla marka ay ku arkaan astaamaha COVID-19.”
Waxaa magaalada Muqdisho maalmahan ku soo batay dadka tacsida u diraayo ehelkooda, iyadoo sidoo kale qabuuraha cusub ee ku yaallo Waxarcadde la geeyay dad badan oo Marxuumiin ah oo magaalada ku dhintay.
Si kastaba, cudurka Coronavirus, ayaa wuxuu si xun ugu sii faafayaa Magaalada gudaheeda, waxaana aad u yar taxadarka Bulshada ay ka muujinayaan Xanuunkaan.
Coronavirus oo Muqdisho ku sii faafay
dad badan u dhintay
Maxkamadda Ciidanka Qalabka Sida oo Amar culus soo saartay
Wararkii ugu dambeeyay Doorashada Uganda iyo natiijooyin hor-u-dhac ah
Dowladaha Somaliya iyo Turkiga oo hirgelinaya heshiisyo muhiim ah